Dagaal Xoog leh oo Ka Socda Magaalada Kismayo – Rasaasa News
Dagaal Xoog leh oo Ka Socda Magaalada Kismayo
Oct 1, 2009 Kismayo, somalia
Kismayo – [October 1, 09] – Wararka ka imanaya Magaalada Kismayo ayaa waxay sheegayaan, in uu ka socdo dagaal khadhaadh, dagaalkaas oo u dhaxeeya laba kooxood oo Islaamiyiin ah, waa ururka Al-shabaab iyo ururka Xisbul Islam. Dagaalka labadan urur u dhaxeeya ayaa ah mid ku saabsan looltan ku saabsan cidii xukumi lahayd magaalada xeebta ah dhaqaalaha ka soo baxa dhinaca dekada.
Inkasta oo labadan urur ay lee yihiin hal hadaf, oo ah in ay si wada jir ah meesha uga saaraan Dawlada ku meel gaadhka ah, balse waxaa ay arintu u egtay mid guul siinaysa dawlada ku meel gaadhka ah, madaama ay labadan urur heshiin waayeen. Arinta keentay khilaafka ururka ayaa ah, arin beeleed in kasta oo la sheegto islamnimo, ayaa waxaa gabal walba xukuma dadkii lahaa gabalkaasi marka laga reebo gabalka Jubada hoose, waana arinta salka u ah dagaalka Kismayo.
Ururka Al-shabaab ee dagaalka ka wada Kismayo ayaa waxaa ugu xoog badan hal beel, meesha dhinaca xaga xisbul islaamna ay ugu badan tahay beel kale, arintaas oo keeni doonta burbur ku yimaada ururada Islamiyiinta ah ee ka dagaalama dhulka Somaliya.
Dagaalka maanta ayaa waxaa ku awood roonaaday sida ay wararku sheegayaan ururka Al-shabaab, oo ah ka dagaalka bilaabay, waxayna adeegsanayaan ideecado ku yaal Kismayo oo ay iyagu gacanta ku hayaan, waxay faafinayaan in ay jabiyeen dulankii ku soo duulay magaalada Kismayo.
Ururka Xisbul Islaam oo iasgu markii horeba aan magaalada u soo galin dagaal ee doonayey in ay culays ku saaraan Al-shabaab wada hadal, balse kolkii ay Al-shabaab ku dhawaaqday dagaal iyana ay sheegeen in labada urur isku dhici doonaan ayaa waxaad moodaa in markii Kismayo laggaga awood roonaaday ay gaabiyeen wararkii saxaafada.
Ururka Al-shabaab ayaa waxay isku dayayaan in ay qaybiyaan ururka Xisbul Islaam iyaga oo xubnaha ugu sareeya ururka Xisbul Islaam ay rabaan in ay ka dhigaan kuwo cadowga la socda, ma sheegayaan cadowgu waxa uu yahay. Dhinaca ururka Xisbul Islaam ayaan iyagu maanta ka hadlin dagaalkii Kismayo ka dhacay iyaga oo aad moodo in la qaybiyey, waxayna ku gaabsadeen kolkii ay saxaafadu la xidhiidhay in ayna hada bixin karin wax waraysi ah.
Isku soo duub oo Magaalada Kismaayo ayaa waxaad moodaa in ay gacanta u gashay beel sheeganaysa magaca ururka Al-shabaaba, waxaa kale si xoog leh u wiiqmiqmaya kalsoonidii loo hayey ururadii Islaamiyiinta ah ee ka dagaalamayey dalka Somaliya.
Waxaan Aad Ugu Faraxsanahay in Maanta la Doondoonayo Tuuggii Ummadda Dilay
Maamulka Kaalinka 5aad oo Xadhig iyo Dhibaato u Gaysata Dhalinyarada Hore Ugga Tirsanaan Jiray ONLF